Home / Love / DASTUURKA CUSUB PDF
Author: Nagar Mazusho
Waxaa lagu casuumay aftida in ay kor jooge ka noqdaan 1, oo qof oo ka kala socda waddamada caalamka iyo dalka gudihiisa. Shaqo-ka-tegidda Xubinta Golaha Guurtida. Kala xadaynta awoodaha saddexda waaxood waxay noqon doonaan sida uu Dastuurku dhigayo. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko.
Haddii ay Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha isku hal mar ku timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad, waxa xilka Madaxweynaha si ku meel gaadh ah u haynaya Guddoomiyaha Golaha Guurtida. Qodobka 60aad-Qaybinta Awoodaha 1 Dowladda federaalku waxa ay awood u leedahay in ay Jamhuuriyada Soomaliya oo dhan u samayso sharciyo maamul-wanaagga ku saabsan, iyadoo raacaysa xuduudaha Dastuurka iyo awoodaha maamulidda sharciyadaas.
Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale. Qodobka 66aad-Awoodaha Xukuumada Federaalka ee Taageera Nidaamka Federaalka 1 Haddii xukuumad dowlad-goboleed ay gudan kari waydo xilkeeda ama ay ku kacdo maamul xumo maaliyadeed, masuuliyada koowaad ee xukuumada federaalku waa in ku taageerto xukuumada dowlad-goboleedda sidii ay wax uga qaban laheyd xad-gudubyadaas, ayna qaado talaabo kasta oo lagama maar maan ah oo dowlad-goboleedda u suurto galinaya in ay xilkeeda u gudato si wax ku ool ah.
Maamulka dastiurka iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah Maamulka Xakuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan ay badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah.
In uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa Golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdegga ah iyada oo la raacayo Dastuurka. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha.
Qaabilaadda diblomaasiyiinta shisheeyaha iyo ka qabashada waraaqaha aqoonsigooda Credentials. Dastuurka Soomaaliya kiiQod. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha ayaa leh hab maamuuska koowaad ee Qaranka.
Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland.
Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Dsstuurka saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah. Xeerka ayaa caddeynaya ciqaabta ka dhalan karta gudasha la’aanta waajibaadka ku xusan faqradda laad, 2aad, 3aad iyo 4aad.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga dastuurrka ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Dhulka Qaranku waa muqaddas; waana laguma xad gudbaan. Xeerarka degdegga ah waxay yeelan doonaan awoodda xeerarka ka soo baxa Golayaasha Wakiilada iyo Guurtidawaxayna dhaqan gelayaan marka uu saxeexo Madaxweynuhu. Guddida Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay: Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u Ieeyahay in la doorto, waxna uu doorto.
Dawladdu iyadoo fulinaysa siyaasadda daryeelka caafimaadka guud, waxa waajib ka saaran yahay ka-haqab-tirka dalka qalabka ka-hortagga cudurrada faafa, helitaanka daaweyn lacag Ia’aan ah iyo daryeelka fayo dhawrka guud. Saxeexa heshiisyada caalamiga ah. Maxamadaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka kooban yihiin: Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha daastuurka iyagoo ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta.
Magacyada Guddiga Isku-duba-ridka Dastuurka: Qof kasta waxa ku waajib ah inuu si hagar la’aan ah u fusub cashuurta iyo takaaliifta kale ee xeerku waajibiyey. Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka hore ayaa sii wadi doona hawlaha ay u xil-saarnaayeen ilaa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka cusubi kala wareegaan cussub muddo bil ah gudaheed.
Maqaamkma Magaalo cudub ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5. Haddii ay Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne-ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badnayn 30 maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda diidmada Golayaasha.
Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah. Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha.
Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin Somaliland. Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda.